Taw Twin Pyaw ဒီ ဂိုဏ်းက အင်အားအကြီးဆုံးနဲ့အခိုင်မာဆုံး :D
ရွာထဲမှာ မိုင်းသွားထောင်ပေးရမလား ပြော :D
သဂျီးပိုက်ဆံနဲ့သဂျီးထုတ်တာဖြစ်လို့ မကြေနပ်ရင်ကြိတ်ခံ ။ :D
ပြောရရင်တော့ သားရွှေအိုးထမ်းပြီးမိန်းမသုံးယောက်ခိုးလာတာကိုမြင်ရသိလိုဖြစ်မယ် :D
ကျုပ်လက်ကိုင်ထားတဲ့ စကားကတော့ ” ကပ်စီးနဲရင် နှစ်ခါပိုကုန်တယ် “” လို့ သာ :D
ကိုယ်က မိုင်းလေးဘာလေးထောင်မလားဆိုပြီး အကွက်သွားချောင်းပါတယ် ဟိုမှာက မပြုံးရဲ့ ကလပ်စကာဗုံးက ပေါက်ကွဲပြီးနေဘီ :D
ဒါနဲ့ဘဲ ကြောက်ကြောက်နဲ့ပြန်ထွက်ပြေးလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းးးး …. :D
သေခြာတာကတော့ မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်း ရာသီဥတု ( အင်တာနက်လိုင်းကောင်း / လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကောင်း ) ကောင်းကြရင်ဖြင့် ရွာထဲမှာ ငြင်းခုန်ပွဲတွေများ ပြန်ပေါ်လာလေမလားးး ထင်မိ :D
Surmi ရွာထဲ ဝင်မပြောရဲလို့ဒီကဘဲ မြှောက်ပေးနေတော့မယ် … ဟိုင်းးးယားးး !! :D
၂၀၁၁ ၂၀၁၂ ကာလဟာ အစည်ကားဆုံးဖြစ်လို့ ကွန့်မတ့်တွေရေးစာတွေဝင်ဖတ်နဲ့ ညနက်သန်းကောင်ကျော်အထိနေအိပ်ရေးတွေပျက်လို့ အိမ်ကဇနီးနဲ့တောင် ရန်ဖြစ်ရသေး :D ( အဲ့ဒီလိုကို ချစ်ခဲ့တာ )
အခုတော့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်တင်ရင် ပထမစာမျက်နှာကနေ ၁၀ ရက်အတွင်း မရွေ့သမို့ အော်တိုငုတ်တုတ် “စတစ်ကီ” :D
တခါတလေ ကိုယ်ရေးဖူးတာလေး ပြန်ဖတ်မိရင် တွေးမိတာက ” အော် . . . ငါအတော်လေး ပေါ ခဲ့ဖူးပါလားးး လို့ :D “
အဲ့ဒီတုန်းက အငြင်းအခုန်စပယ်ရှယ်လစ်ကတော့ ဦးဖေါ ပေါ့လေ :D
ရွာက ဘာမှဖြစ်တာမီဟုတ်.. ကိုယ်က စာရေး စာဖတ် ပျင်းသွားတာ. နာဟဲ့ ငပျင်း :D :D
Surmi ပွဲသွင်းနေကျလူတွေကိုယ်တိုင် ပ်ုလီယိုဖြစ်နေလို့ :D
အဲ့ဒါဟာလဲ ရွာအစွဲ ဘဲထင်ပါ့ :D
Surmi ဒါဆို ဒီပို့စ်နှစ်ခုလုံးရောကွန်မန့်တွေရော ရွာထဲသိမ်းလိုက်တော့လေ :D